Orinasa masinina masom-borona China Gel | Huanyi
Kompresy mafana sy mangatsiaka, azo ampiasaina indray, tsy misy famoahana, tsy misy poizina
Milanja: 120g, 130g, 160g, 180g
Ampiasaina amin'ny fitsaboana mafana sy mangatsiaka dia manampy amin'ny fanalefahana ny masony mivonto, maso mivonto, tsy mahazo aina amin'ny sinus, migraines, manome fanampiana tsy misy fanafody. Azo ampiasaina ho toy ny sarontava maso manakana ny hazavana amin'ny hafanan'ny efitrano.
Miseho toy ny saron-tava izy io, ary azo ampiasaina ho toy ny sarontava maso mangatsiatsiaka, fa aza ferana ny eritreritrao. Ity vokatra ity dia tena ilaina amin'ny famonoana mafana na famatrarana mangatsiaka, amin'izay azonao ampiharina amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana. Miaraka amin'ny tadiny, azo ampidirina amin'ny kiho, ny lohalika, ny kitrokely ary ny tonon-taolana hafa izay mila tsaboina mafana. Ity vokatra ity dia fitaovana "fanorana" multifunctional ary tsy halahelo azy io ianao.
MAHAFINARITRA NY MASY GEL EYE MASOLY: NY mifoha amin'ny maso reraka sy mivonto mitaingina faribolana mainty dia tsy fanombohana tsara indrindra isan'andro. Ny saron-tava mason-dranomandry dia mampihena ny fihoaram-pefy, miantoka fialantsasatra mahomby!
SORATRA MASO MAHASOA MAHASOA: ny sarontava mangatsiaka ho an'ny maso mibontsina dia manampy amin'ny fanalefahana ny fanaintainana sy ny fivontosana mety hitranga noho ny olana ara-pahasalamana maro hafa. Sarontava masom-bolo mangatsiaka misy gel miaraka amina Tady RUBBERIZED.
Fitsaboana ny maso mafana sy mangatsiaka: fonosana mangatsiatsiaka amin'ny masom-bava dia azo avela hohafana ho an'ny spaoro mampitony na nafanaina hanaovana fitsaboana mafana. Ny masom-bolo Frozen Gel dia vita amin'ny lamba malemy izay mipetraka moramora amin'ny masonao.
Na mampiasa azy io amin'ny fitsaboana mafana na mangatsiaka ianao dia tsy tokony hafanana na hatsiaka be ny mari-pana. Sorohy ny fiasan'ny vokatra manimba ny vokatra ary manimba ny vakana.
Previous: mite ranomandry
Manaraka: kitapo mangatsiaka divay
Mametaka maso mangatsiaka gel
Kompresy amin'ny maso amin'ny gel
Sarontava amin'ny mason'ny gel
Fametahana mafana ny gel ho an'ny maso
Kompresi-maso mafana amin'ny gel
Saron-tava fametahana maso